Jacayl Waalli Ah Oo U Dhexeeye Bellerin iyo Esha Gupta + Sawirro
HomeWararka MaantaJacayl Waalli Ah Oo U Dhexeeye Bellerin iyo Esha Gupta + Sawirro
Waa dhab jacaylku, filimada Hindiga ahna badankoodu waxay ku sallaysan yihiin qisooyin la qurxiyey oo mala-awaal jacayl ka buuxo.
Arrintaas oo kale ayaa ka dhex socota kooxda kubadda cagta Arsenal oo uu laacibka baasha midig ee Hector Bellerin uu jacayl bastii la yahay, kaddib markii ay xidhiidh wada sameeyeen gabadh lagu magacaabo Esha Gupt oo ku guuleystatay quruxda waddanka Hindiya, markii dambena noqotay aktarad caan ah oo metesha filimada.
Bellerin oo ay da’diisu tahay 21 jir, ayaa uu qaab ciyaareedkiisa xili ciyaareedkani horumar weyn sameeyey, iyadoo dhinacna uu ka jilayo jacaylka Gupt.
Gupt 2007 ayey ku guuleysatay quruxda India
Labadan xiddig ee midna jacaylka metesho midna kubadda ciyaaro, ayaa iyagoo ku midaysan jacaylkooda waxa lagu arkay badhtamaha magaalada London iyagoo ku socda Hotel lagu magacaabo Vanilla Black oo laga cunteeyo, halkaas oo markii ay gelayeen iyo bixitaankoodiiba laga qaaday sawirro iyagoo ay ka muuqato farxad iyo in ay isku qanacsan yihiin.
Bellerin iyo Gupta oo ku socda Hotelka
Wakhtiga ay gudaha ku jireen ayaa la sheegay in ay ka badnayd saddex saacadood, iyagoo waliba dalbaday Khudrad kaliya, laakiin haasaawe iyo qisooyinka jacayl ee quluubtooda ku duugan isku soo bandhigayey.
Markii ay baxeen waxay fuuleen gaadhi Mercedes ah oo uu leeyahay Bellerin.
Bellerin oo lala xidhiidhinayo in uu lacag badan ugu wareegi doono Barcelona, ayaa laga yaabaa in arrintaas ay caqabad ku noqoto Gupta oo si weyn u taageerta Arsenal, sawirro badanna ku baahisay baraheeda bulshada iyadoo xidhan dharka Gunners.
Waxay sawirro kula wadaagtaa boggeeda Instagram-ka malaayiin qof oo taageereyaasheeda ah oo ay ku jiraan Santi Gazorla iyo Robert Pires. Sawirrada boggeeda ku jira wax aka mid ah kuwo ay wada galeen Bellerin.
Quruxdeeda dabiiciga ah, jidhkeeda wakhtiga badan ay gelisay iyo qorqornaanta Rabbi ku galladay, ayaa da’deeda oo ah 30 jir ka dhigtay inay u ekaato 18 jir, sannadkii 2007 ayaanay ku guuleysatay gabadha ugu qurux badan waddanka Hindiya, waxaanay abaalmarinno ku qaadatay Filimada RAAZ 3D oo soo baxay 2012 iyo filimka suuqa aadka u galay ee Rustom ee sannadkan 2016 la metelay.
Rasmi: Inter Milan Oo Tababare U Magacowday Spalletti
Mane Oo Deg-Deg U Kala Saaray Liverpool Iyo Tottenham Soona Af-jaray Guuldaradii Bariisatay Klopp
Sucuudiga Oo Shan Shuruudood Ku Xidhay Xayiraad Ka Qaadista In Haweenku Gali Karaan Garoomada Ciyaaraha
05/05/2016 Abdiwahab Ahmed